သစ္စာအလင်း: April 2009
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:57 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:46 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Awakening Presence thitsaralin American Nuns' Community
Publish at Scribd or explore others: Books american nuns commun
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:28 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Planting Dhamma Seeds the Emergence of Buddhism in Africa(Venerable Monk , Uganda)Steven Kaboggoza
Planting Dhamma Seeds the Emergence of Buddhism in Africa
Publish at Scribd or explore others: School Work Magazines & Newspape buddhism myanmar
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:13 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
အရှင်ဘုရားဟော ကြားရှင်းပြတဲ့ အကုသိုလ် အကြောင်းကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်ဘုရား။
အဲဒီအခါမှာ..(စွဲလန်းခြင်းအဆုံးမြင်လျှင်..ဆင်းရဲခြင်းဆုံးလိမ့်မယ်) ဆိုတာ အလွန် ဉာဏ်ထက် မှသာ သိနိုင် တာ ပေါ့နော် ဘုရား။
လိုချင်တာမရှိတော့အချိန်ဟာ လိုချင်တာ ပြည့်စုံတဲ့ အချိန်ပဲဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ကလည်း..စိတ်ဝင် စားစရာပါဘုရား။တပည့်တော် ကြုံဘူးမှသာ ပြန်ပြောင်း ပြောပြနိုင် ပါလိမ့်မယ် ဘုရား။ စွဲလန်း ခြင်း ကင်းအောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဘုရား။
အမှတ်အသားရှိသော သဘောတို့သည်ထင်ရှားရှိကုန်၏။လို့ဆိုတဲ့ အတိုင်း အပြစ်ကင်းခြင်းလက္ခဏာ တစ်ပါး နှင့် ချမ်း သာအကျိုးပေးခြင်းလက္ခဏာတစ်ပါး လက္ခဏာ(၂)ပါးပြည့်စုံရင် ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ တပည့်တော် မှတ် သား ထားပါတယ်ဘုရား။
အပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတာ စွဲလန်းခြင်းကနေကင်းနေရမှာပေါ့ဘုရား။စွဲလန်းခြင်းမှကင်းတယ် ဆိုတာ စွန့်လွှတ်ခြင်း ပဲဖြစ်နေပါတယ်..။စိတ်မှစွဲလန်းခြင်းရှိလျှင်အပြစ်ရှိပါတယ်..။
အပြစ်နှင့်တကွဖြစ်ခြင်းလို့ လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်..။စွန့်လွှတ်ခြင်းပါပဲ..။(စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ချမ်းသာခြင်း)လက္ခဏာ ဟုလက္ခဏာ (၂)ပါးဖြစ်တာပေါ့ဘုရား။
(၁) ကိုယ် ပိုင်ကိုယ် ဆိုင်ဟု ရှိပြီးဖြစ်ပြီးသားကို (စွန့်လွှတ်မယ်)ဟု ပုဗ္ဗစေတနာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာခြင်း အမှတ် အသားရှိသော လက္ခဏာ။
(၂) ကိုယ် ပိုင် ကိုယ် ဆိုင်ဟုရှိပြီး၊ဖြစ်ပြီးသားကို (စွန့်လွှတ်တယ်)ဟု မုဉ္စစေတနာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာ ခြင်း အမှတ် အသားလက္ခဏာ။
(၃) ကိုယ် ပိုင် ကိုယ်ဆိုင်ဟု ရှိပြီး ဖြစ်ပြီးသားကို စွန့်လွှတ်ပြီး၊ (စွန့်ပြီးထားတာ ကို ဝမ်းသာတယ်)ဟုပရ စေတ နာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသားခြင်းအမှတ်အသားလက္ခဏာ အားဖြင့် စေတနာသုံးပါးကို ခွဲခြား သိနိုင် တာဆို တာကိုလည်းတပည့်တော် သဘောပေါက်ပါတယ် ဘုရား။
ကိုယ် ပိုင် ကိုယ် ဆိုင်ဆိုတာ..တကယ် တော့(၃၁)ဘုံလုံးပါတာပဲနော်..။အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်တော့
၄။ခန္ဓာ အမျိုးမျိုး ရှိနေတာရယ်…ထို လေးပါးကို (စွန့်လွှတ်မယ်၊စွန့်လွှတ်တယ်။စွန့်ပြီးတာကို ဝမ်းမြောက်တယ်)….ဆိုတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းစေတနာတွေထည့်သုံးရင် ကုသိုလ် ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်သဘောပေါက်လိုက်တာကတော့…စီးပွားဥစ္စာ၊အလုပ်၊အာရုံ၊ခန္ဓာ ဆိုတဲ့လေးပါးတို့သည်…သုံးစရာတွေဖြစ်ပါတယ်..။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတော့ သုံးစရာတွေကို အသုံးပြုတဲ့ (၂)ပါးဖြစ်ပါတယ်..။
သုံးစရာလေးမျိုးမရှိတဲ့ သတ္တဝါ ဟာ (၃၁)ဘုံမှာမရှိပါဘူး။အသုံးပြုတာ ပဲကွာ ခြားနိုင်ပါတယ်ဘုရား။
အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကို ရှင်းပြတာ…မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော် တစ်ရပ်လုံးကို အကျဉ်း ချုပ်လိုက်လျှင်…သုံးစရာလေးမျိုးကို အကုသိုလ်နဲ့မသုံးပဲ..ကုသိုလ် စိတ်၊ကြိယာ စိတ်များ နှင့်သာ သုံး တတ် အောင်သင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ တပည့်တော် ခံယူကျင့်သုံးနေပါတယ်ဘုရား။
(၁)စီးပွားဥစ္စာ များကို စွန့်လွှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးသုံးတတ်လျှင်..၊(ဒါနကုသိုလ်)ဖြစ်ပါတယ်..။စီးပွားဥစ္စာကို စွဲလန်းသောစိတ်ဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးအသုံးပြုလျှင် (အကုသိုလ်)ဖြစ်ပါတယ်..။
(၂) အလုပ် အမျိုးမျိုးကို လုပ်တဲ့ အခါမှာ..ကာယကံ၊ဝစီကံ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အင်အားကို အမြဲစွန့်လွှတ်နေရပါတယ်..။
သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊သူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးခြင်း။ကာမဂုဏ်များမှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်း (အဗြဟ္မစရိယမှုပြုခြင်း)ဟူသော ကာယဒုရိုက်သုံးပါး၊လိမ်ညာခြင်း၊ရန်တိုက်ခြင်းနှုတ်ကြမ်းခြင်း၊ အရှော် အပြစ်ပြောခြင်းဆိုတဲ့ ဝစီဒုစရိုက်တွေကို ရှောင်ရှားပြီး မိမိပြုလုပ်သော ကာယကံ၊ဝစီကံ၊ အလုပ်တိုင်းမှာ စွန့်လွှတ်သော စိတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်း သာအောင် ထားပြီး သုံးတတ်ခြင်းကို (သီလကုသိုလ်)လို့ခေါ်ပါတယ်..။
(၃)အာရုံအမျိုးမျိုးကို အာရုံပြုသော အခါ…စွန့်လွှတ်သော စိတ်ဖြင့်သိပြီး စိတ်ချမ်းသာ အောင်ထား ပြီးသုံး တတ် ခြင်းကို (သမထကုသိုလ်)လို့ခေါ်ပါတယ်..။အာရုံအမျိုးမျိုးကို အာရုံပြု သော အခါစွဲ လန်းသော စိတ်ဖြင့်သိပြီး စိတ် ဆင်းရဲခံနေခြင်းသည်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရား။
(၄)ခန္ဓာ အမျိုးမျိုးဟာ ဘာမှ မဟုတ်ကြောင်း အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တ တို့၏သဘော တွေကို သိပြီး စွန့်လွှတ်သော စိတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ခြင်း ကို(ဝိပဿနာကုသိုလ်) လို့ခေါ်ပါတယ်..။
ခန္ဓာ အမျိုးမျိုးပေါ်မှာ အထင် အမျိုးမျိုးဖြင့်စွဲလန်းသောစိတ်ဖြင့်သိပြီး စိတ်ဆင်းရဲခံနေခြင်းသည် အကုသိုလ် ဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရား။ဝိပဿနာ နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကျယ်ဝန်းစွာရှိနေမှာမို့ ဆက်လက် ပြီးမိန့်တော် မူပါအုံးဘုရား။
အခုတော့ တပည့်တော် သဘောပေါက်ပါပြီဘုရား။တပည့်တော် တို့ရဲ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ (သက်ရှိသက်မဲ့စီးပွားဥစ္စာ၊အလုပ်အမျိုးမျိုး၊ အာရုံအမျိုးမျိုး၊ ခန္ဓာ အမျိုးမျိုး)ကို ကုသိုလ် နဲ့သုံးတတ် ဘို့သာ လိုပါ တော့တယ်ဘုရား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:53 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 1:21 AM2မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:54 AM2မှတ်ချက်ရေးရန်
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual Books ajhan chah bikkhus
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:25 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Publish at Scribd or explore others: Books maha saranagon
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:59 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Mun Bio thitsaralin Ajhan Mun Biography
Publish at Scribd or explore others: Books ajhan chah
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:44 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Publish at Scribd or explore others: Books chanmyae sayadaw dha
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:28 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:43 AM5မှတ်ချက်ရေးရန်
နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘယ်လိုစိတ်ကူးများဖြင့်ဘယ်လို ဖြတ်သန်းလွန်မြောက်မှာလဲ..ကူးပြောင်းကြမှာလဲ..။
မေမေ ကတော့ စိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်..။
ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ နဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ် သန့်စင်မှု ၊ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့မဲ့ကိစ္စတွေကလွဲပြီး
ကျန်တာ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ကိုင် ခွင့်မေမေပေးထားခဲ့ပါတယ်..။
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အရွယ် နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ မွေ့လျော်မှုတွေ ရှိနေတာကို မေမေ ဘယ်လိုမှ အပြစ်မပြောလိုပါ.။
မေမေ့စိတ်ကြိုက် ဖြစ်အောင်..တရားစခန်းဝင်ပါမယ်..ဥပုသ်စောင့်ပါမယ် ဆို ပြီးတော့လည်း... မေမေ့စိတ်အား ညှာတာ နားလည်စွာ ပြော မိလိုက်ရင်လည်းကလေးတို့ ဝစီကံအတွက် ဝန်တက် နေမှာစိုး ပါတယ်..။
အရာရာ အကြောင်းညီညွတ်ရင် ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာ..ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားပါတယ်။
မေမေဟာ ကလေးတို့ကို စောင့်ရှောက် မဲ့သူ ပံ့ပိုးဖေးမ မဲ့သူ ၊သူတကာ မိခင်တွေထက် မလျော့တဲ့ မိခင်မေတ္တာနဲ့ကူညီမဲ့သူ၊ လိုအပ်ခဲ့ရင် ကိုယ် ပိုင် အလင်းရောင် စွမ်းအားနဲ့ လမ်းပြမဲ့သူသာ ဖြစ်ပါတယ် ကွယ်..။
ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သူ၊လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်သူ တစ်ဦးမဖြစ်လေရအောင် အမြဲ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ မေမေ ကိုယ်တိုင် လည်း ကန့်သတ်မှု၊ချုပ်ကိုင်မှုများကို မုန်းတီးခဲ့ပါတယ်..။
မေမေထိုင်းမှာကျောင်းတက်တုံးက ဖူးခဲ့ဘူးတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူ အကြောင်း ကလေးတို့ကို ပြောပြချင်တယ်..။
ရွှေချမထားဘူးကျောက်သားပကတိ အနက်ရောင်၊ အမိုးအကာ အဆောက် အဦ မရှိဘူး၊ ကောင်းကင်ပြာ အောက် မှာ မားမားစွင့်စွင့်တည် ရှိနေတာကို က အားမာန် ဖြစ်စေတယ်..။
ရင်ပြင်တော် ကျောက်သားပြင်ရှိတဲ့ အပြင် စိမ်းလန်းနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်ကလည်းဝန်းရံထားတယ်..။
ရင်ပြင်တော် ပေါ်က ကြေးပန်းအိုးကြီးတွေက ကြာပန်းတွေ..အပြည့်နဲ့...။ လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အရသာကို ထိတွေ့ခံစားရတယ်လေ..။
မေမေ့ စီနီယာတွေရဲ့ အစီအမံ နဲ့ ညနေခင်းအမီရောက်အောင်သွားဖူးကြတာ..။
မသွားခင် ဘန်ကောက်က ပန်းဈေးမှာ နှင်းဆီပန်းတွေတစ်ပွေ့တစ်ပိုက် ဝယ်ကြ ပြီး ကိုယ်တိုင် ပန်းအိုးထိုး ရတာ...က လည်း သဒ္ဓါပီတိဖြစ်စေခဲ့တယ်..။
ပြီးတော့ အပူလျော့ ပြီးဝင်ခါနီးဆဲဆဲနေရောင်အောက်မှာ မြက်ခင်းစိမ်းကို ဆင်းပြီးမေမေ တို့တရားထိုင် ခဲ့ကြ တယ်..။
ဆယ်စုနှစ် အချို့ ကို ပူလောင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတဲ့မေမေ့ အတွက်....... အဲဒီတုံးက ရခဲ့တဲ့ စိတ် ကြည်လင် ငြိမ်းချမ်းမှု ဟာ ဘဝမှာ ပထမဆုံးနဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲလို စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ အရသာကို ကလေးတို့ကို ခံစားရရှိစေချင်တယ်..။ ဘုရားဖူး ကအပြန်မေမေ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး မျှဝေ ပေးလိုက် ချင်ပါတယ်..။
မြေမှာ အုပ် မိုး၊စိုးမိုးရပ်တည်..
ခွန်အားဆိုတဲ့ မြစ်တစ်စင်း.. စီးဆင်းဖွင့်လှစ်..
အကိုင်းဖွဲ့ရှုပ် ဝါးရုံပင် တစ်အုပ်လို လည်းမဟုတ်ခဲ့....
ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် တာဝန်ကျေပြွန်ခြင်း...ဖြင့်
အသိ မှန်ကန်.. တစ်ဖန်တစ်ဖန်..
ပြန်၍ မတိုး ဖလံမျိုးလို...
မီးတွေ မီးတွေ..ပင်လယ်ဝေခဲ့ နေ့ရက် များ..
မိမိရဲ့ သတိ မိမိ ကို စောင့်ရှောက်
အကြောက်တရား၊ အနှောက်တရား..မှောက်မှားစရာ မရှိ..။
စိတ်ရဲ့လုံခြုံမှု...စုစည်းသန့်စင် ...ဝိဥာဉ် အလင်း...
ဘဝတွင်းသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက် ခဲ့ပါပြီ..။
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ ဘန်ကောက် မြို့၊ ဗုဒ္ဓွမွန်ထော ဘုရားဖူး ခရီးကို ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:48 PM2မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ သြဝါဒ များ (၈)
ရွှေကျင် နိကာယ၊ရတ္တညူ မဟာနာယက ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး
ဘယ်လောက်ပဲ ပစ္စည်း တွေချမ်းသာနေ..ချမ်းသာနေ..
စိတ်အေးချမ်းအောင် မထားတတ်ရင် ပူလောင် ပင်ပန်းတယ်..။
ပူပန်တယ် ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး..။
မောဟကြောင့်ပူလောင် ပင် ပန်းတယ်..။
တရားအဆုံးအမ သီလ သာသနာ ကိုယ်မှာရှိရင်
အပါယ်ကျရောက်စေတတ်တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ အတွက်..
ပူလောင် ပင် ပန်းမှု မရှိပဲ အေးငြိမ်းချမ်းသာ ရတယ်..။
သမာဓိသာသနာရှိရင် စိတ်တွေ စင် ကြယ်အေးချမ်းတယ်..။
ပညာ သာသနာရှိရင်လည်း စိတ်တွေ စင် ကြယ် အေးချမ်းပြီးတော့
သတိပညာနဲ့ နေတဲ့ဘဝဖြစ်လာတယ်..။အဲဒီလို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ
အေးအေးချမ်းချမ်း နေသွားတတ်တဲ့ယောဂီတွေ..တော်တော် များများရှိကြပါတယ်..။အဲဒီတော့
ကျောင်းမှာနေတုံးတင် မဟုတ်ပဲနဲ့..အိမ်မှာ နေတော့လည်း ဒီလိုပဲ…
သတိဉာဏ်လေးနဲ့ နေသွားမယ် ဆိုရင်…ကောင်းသထက် ကောင်းသွားမယ်..။
အားလုံးကိုယ် စီ ကိုယ်ငှ အသီးသီးကျောင်းမှာ ကျင့် ကြံနေထိုင် သလို
အိမ်မှာလည်းကျင့် ကြံနေထိုင် နိုင်အောင်…ကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း..။
လောကကြီးမှာ စာရင်းစစ်ဆိုရင် ဟိုရုံးဒီရုံးက စာရင်းဇယား တွေကို မှန်မမှန်၊ကိုက် မကိုက်
သေသေချာချာ လုံ့လ စိုက် ပြီး စစ်ဆေးကြရတယ်နော်..။
မိမိကိုယ် လည်းမိမိ ကာယကံ၊ဝစီကံ မနောကံ သုံးပါးသော ကံတွေ ပြုတာ မှန်မမှန် ..
လုပ် တဲ့ အလုပ် ဟာ ကုသိုလ် ဖြစ်တဲ့ အလုပ်လား..။အကုသိုလ် ဖြစ်တဲ့ အလုပ်လားဆိုတာ
ကိုက် မကိုက် စစ်ဆေးသင့်ကြတာပေါ့..။
ဒါကြောင့် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကိုယ့် အလုပ်တွေကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ပြန် ပြီးစာရင်းစစ်ကြဘို့ကောင်းတယ်..။
မွေးနေ့ဆိုတာ ပညတ်မွေးနေ့နဲ့ ပရမတ်မွေးနေ့ နှစ်မျိုးရှိတယ်..။
ပညတ်မွေးနေ့က လူကြီးမိဘတွေက သတ်မှတ်ပေးထားတာ..
မွေးသေနေတာ သိတဲ့နေ့ကို ခေါ်တာ..။
ရက်ရာ ဇာ နဲ့ ပြဿဒါး
ရက်ရာဇာ တို့ ပြဿဒါးတို့ဆိုတာ သိကြရဲ့လား။
ကောင်းသော စိတ်ရှိတဲ့နေ့..ကောင်းသော အလုပ် လုပ်တဲ့နေ့..ကုသိုလ်ရတဲ့နေ့ဟာ ရက်ရာဇာ ပဲ..။
မကောင်းသော စိတ်ရှိတဲ့နေ့..။မကောင်းသော အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့..အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဟာ ပြဿဒါး..။
ဒုလ္လဘ နဲ့ သုလ္လဘ
သုလ္လဘ ဆိုတာ ဒုလ္လဘ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ပဲ..။
လွယ်လွယ်ရတော့ လွယ်လွယ် ပဲ သဘောထား
ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့ စား အပေါစားရဟန်းဖြစ်ကရော..။
ရတောင့်ရခဲ ဒုလ္လဘ အဖြစ်ကိုတန်ဘိုးထား ကျင့်ကြံပွားများကြ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:38 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ သြဝါဒ များ (၇)
ကိုယ် တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှ…ကိုယ် ပိုင် ဉာဏ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် သိရမဲ့ တရား။
ကြားဘူးနားဝနဲ့တဆင့်ကြားနဲ့ သိရတာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ် ပိုင် ကိုယ် တိုင် ဉာဏ်နဲ့သိရမယ်…..။
အဲလို သိတော့ ဘယ်လောက် ကြာမှ သိရမလဲ၊၊??????
သန္ဒိဋ္ဌိက တိုက် ရိုက် သိရတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ သိရပါတယ်..။
သင်ပြပေးတဲ့အတိုင်း…အခု နှလုံးသွင်းရင် အခု သိရပါတယ်..။
ကိုယ့်စိတ်လေးစင်ကြယ်လား မစင်ကြယ်လား ။စိတ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်….
အခုကြည့်ရင် အခု စင်ကြယ်ပါတယ်..။
(အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ)မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆတဲ့ အပ္ပမာဒတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြနော်..။
တွေးနေ ဆနေရင် ဉာဏ်အားမကောင်းဘူး။
ကြံစည်တဲ့ဉာဏ်၊ တွေးတောတဲ့ ဉာဏ်ပဲဖြစ်မယ်..။
မမေ့မလျော့ မပေါ့ မဆတဲ့ဉာဏ်…
တွေးတော ကြံဆမှုမရှိတဲ့ ဉာဏ်မျိုးမှ
အထက်တန်းကျတဲ့ ဉာဏ်…အထွဋ်အထိပ် ရောက် နိုင်တဲ့ ဉာဏ်..။
အဲဒီ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်..။
အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် ဗောဓိပက္ခိယ တရား၃၇ပါး။
သီလမဂ္ဂင် ၃ပါး..။သမာဓိ မဂ္ဂင်၃ပါး။ပညာမဂ္ဂင် ၂ပါး။မဂ္ဂင် ၈ပါးရပြန်တယ်.။
သီလ သမာဓိ ပညာသိက္ခာ ၃ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်..။
သီလ သမာ ဓိ ပညာ ဖြစ်ဘို့ရာ သတိမဂ္ဂင် တစ်လုံးပဲ..။
အပ္ပမာဒတရားဆိုတာ သတိပဋ္ဌာန် ရှိနေတဲ့ အတွက် သမာဓိတွေလည်း ညီညွတ်မှုရနေတယ်..။
သတိမရှိရင် သမာဓိ ကဦးထောင်ပဲ့ထောင် အိုးနင်းခွက်နင်းဖြစ်နေတယ်..။
သတိမရှိရင် ပညာ ဘာဝနာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒကာ ၊ ဒကာမတွေ အသုံးလုံးကြေဘို့လိုတယ်နော်..။
အသုံးလုံးဆိုတာ အလောဘ အဒေါသ အမောဟဖြစ်ဘို့ကိုပြောတာ..။
လောဘက ရှိတာကို မပေးချင်ဘဲတွန့်တိုတယ်..။
ဒါပေမယ့် သူမဝယ်စားပဲ အငတ်ခံနေခဲ့တယ်..။အဲဒါလောဘပဲ
ဟိုဟာလေး ကောင်းလိုက်တာ..ဒီဟာလေးကောင်းလိုက်တာ ဆိုရင်လည်း လောဘပဲ..
လော ဘကို တဒင်္ဂပယ်ဖြတ်နိုင်ရန် အလောဘပေါ့..။
လှူကြ တန်းကြ ပေးကြ ကမ်းကြ ဒါနဟာ အလောဘ။
ကိုယ်နှိုက်မဲ့ ဟင်းခွက် သူများဦးသွားတော့မကျေနပ်ချင်ဘူးမှုတ်လား..။အဲဒါဒေါသပဲ..။
လိုချင်တာမရလို့..မကျေနပ်တာ ဒေါသ..။ငါမှ ချမ်းသာတယ်..။
ဒေါသကိုအချိန်မီ မငြိမ်းနိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးလောင် သလို လောင်ကျွမ်းစေတယ်..။
ဒေါသကို အ တစ်လုံးထည့်ပြီး ငြိမ်းသတ်ရမယ်..။
သီလ ဆောက်တည်ထားရင်းက မေတ္တာစိတ်တွေ ဖြစ်နေကြတော့
ဒေါသမဖြစ်ရင် အဒေါသ..ဒုတိယ အတစ်လုံးကြေသွားပြီ..။
လောဘဖြစ်မှန်း ဒေါသဖြစ်မှန်း မသိတာ မောဟ..။
မသိမှုမောဟကြောင့်ပဲ မကောင်းတဲ့လောဘဆိုး ဒေါသဆိုးတွေဖြစ်ရပြန်တယ်..။
မောဟပျောက်အောင် သတိတရား လက်ကိုင်ထားရမယ်..။
နောက်ဆုံး အတစ်လုံး က ဉာဏ် နဲ့သတိနဲ့ယှဉ်နေတယ်..။
တွေဝေမိုက် မှားခြင်းမရှိ အကောင်းအဆိုးနဲ့ ဖြစ်ပျက်သမျှသိနေအောင်..တရားဘာဝနာရှုပွားမှတ်သားနေခြင်းဟာ အမောဟ ပါပဲ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:28 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ သြဝါဒ များ (၆)
သစ်ပင် ကြီးလည်း မလဲပါစေနဲ့..။
ကြည်ကြည် လင် လင် တသွင် သွင် စီးဆင်းနေတဲ့..မေတ္တာမြစ်ကြီးကို ဆိုလိုတာလေ..။
လူလူချင်းမေတ္တာထားကြ ၊မေတ္တာ တရားတွေ ပွားများကြ
မေတ္တာတွေ မခမ်းကြစေနဲ့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ပဲ..။
သစ်ပင်ကြီးလည်းမလဲပါစေနဲ့ …တဲ့..။သစ်ပင် ကြီးဟာ အခက်အလက် အရွက်တွေ
ဝေဝေဆာဆာ နဲ့ အရိပ် အာဝါသကိုပေးတယ်..။ထို့အတူပဲ..
ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာ သုံးပါးရဲ့ အရိပ် အာဝါသကောင်းကို
ခိုလှုံရလို့လည်း ကြီးပွားချမ်းသာ ခြင်းကို ရတယ်..။ဒီအရိပ် အာဝါသတွေကို အမိအရခိုလှုံဘို့လိုသလို..
အရိပ် အာဝါသတွေကိုမဖျက် ဆီးမိဘို့ ၊ကျေးဇူးမကန်းမိဘို့ သတိထားရလိမ့်မယ်..။
သစ်ပင် ကြီးကို ခုတ်လှဲပစ်ခြင်းဟာ အရိပ်အာဝါသကို ဖျက်ဆီးရာရောက်တာပဲ..။
ဒါကြောင့် သစ်ပင် ကြီးမလဲအောင် ကြိုးစားထိမ်းသိမ်းကြ..။
ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲပါစေနဲ့ ဆိုတာကတော့ ရိုးရာ ဓလေ့ ထုံးစံတွေကိုပြောတာပါ..။
မိဘဘိုးဘွားလက် ထက် ကတည်းက လိုက်နာ ကျင့်သုံးလာ ကြတဲ့
ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ ကောင်းတွေ..။မပျောက် ပျက်ရအောင် ထိန်းသိမ်းပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေထိုင်ကြ..။
ကိုယ် နဲ့နှုတ်ယဉ်ကျေးအောင်..စင် ကြယ်အောင် ဆုံးမတာ…သီလသာသနာ
စိတ်တွေယဉ်ကျေးအောင်၊ စင်ကြယ်အောင်..အပူသော ကတွေငြိမ်းသွားအောင်..သမာဓိသာသနာ..။
အခုတရားအားထုတ်နေရင် သီလလည်းရှိနေတယ်..။စိတ်လည်းစင် ကြယ် နေတယ်..။
ဉာဏ်အမြင် စင် ကြယ်အောင်၊ဝိပဿနာ ဉာဏ်၊မဂ်ဉာဏ် ၊ဖိုလ်ဉာဏ်..နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရဘို့
ဉာဏ်အမြင်စင် ကြယ်ဘို့ အားထုတ်တာ..ပညာ သာသနာ..။
အဲဒီသာသနာ ကိုယ် မှာ ရောက်ရင် ဘေးတွေကွယ်ပျောက် ချမ်းသာ ရောက် ပြီးနေတော့မှာ..။
တရားကဘဝထဲကိုရောက် အောင်သွင်းထားမှ ဘဝထဲမှာ
ကိုယ် လုပ်သမျှ ကိုင် သမျှတွေက တရားတွေချည်းဖြစ်နေမှာ..။ မတရားတာ မဖြစ်ရတော့ဘူး..။
စိတ်ကူးတိုင်း စဉ်းစားတိုင်း၊ ကြံစည်တိုင်း တရားသဖြင့်ပဲ..။
အဲဒါကို…သာသနာ ကိုယ် မှာရောက်မှ..
ဘေးတွေကွယ်ပျောက် ချမ်းသာရောက်တယ် လို့ အဲဒီလို မှတ်သားထားရမယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:30 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ သြဝါဒ များ (၅)
နှစ်သစ်ပြောင်းတယ်ဆိုပြီး လူသစ်ဖြစ်အောင် ခေါင်းလျှော်ကြ အဝတ်လျှော်ကြလုပ် ကြတယ်..။
စိတ်သန့်ရှင်းဘို့ က လူသန့်ရှင်းဘို့ထက် ပိုအရေးကြီးတယ်နော်။
ကိလေသာ အညစ်အကြေးတွေကို အမြဲလျှော် ဖွတ်နေမှ စိတ်သန့်ရှင်းဖြူစင်တယ်..။
နှစ်သစ်ကူးတဲ့အခါ ငါးလွှတ်ဘူးကြတယ် နော်..။
ကိုယ်ပါ ငါးဖြစ်ပြီး(၁၀)ခါ အလွှတ်ခံရရင် မသက်သာ ဘူးနော်..။
သူ့သေဘေးကလွှတ်ရသလို ကိုယ်လည်း အိုနာသေ ဘေးက လွတ်ပါရစေ ဒီလိုဆုတောင်းရမှာ..။
သတိ သတိ သတိ
လောဘနဲ့ ဒေါသကို မောဟက ကြီးစိုးချယ် လှယ်တယ်..။
သူတို့ကို နိုင်တာ အပ္ပမာဒ ဆိုတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲ..။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားကို ခွဲလိုက်တော့ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ။
သီလ နဲ့ သမာဓိကို ကြားက သတိက ပဲ့ကိုင် အုပ်ချုပ်တယ်..။
သမာဓိ နဲ့ ပညာ မှာလည်း သတိကပဲဦးဆောင်တယ်..။
နိဗ္ဗာန် ပို့တဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာ ပွားများကြောင်းမှာ (သတိ )သာ လျင် အခရာ ဖြစ်တယ်..။
သတိမပါရင် ဘာ မှ အရာမရောက်ဘူး။
သူများကိုလိုက် ကြည်ညိုမဲ့ အစား..
တရားတိုးတက် ရန် အင်္ဂါ (၆)ပါး
အနေကောင်းဘို့ အကြောင်း ဂုဏ်ခြောက်ထွေ..။
ယောဂီက အလုပ် ကိစ္စနည်းရတယ်..။စကားလည်းနည်းရတယ်..။
ကိုယ် အဖေါ်တင် မကဘူး၊စိတ်အဖေါ်လည်းမရှိရဘူး။
ဟိုဟာ လိုချင် ဒီဟာလိုချင်တဲ့ စိတ်ထဲက အဖေါ်တွေရှိနေရင် စိတ္တဝိဝေက မရှိဘူး။
ရော နှော မှုလည်းကင်းရမယ်..။မရောရဘူးနော်။
ချဲ့တယ် ဆိုတာ မှာလည်း…လိုချင်တပ် မက် မှုတဏှာ နဲ့လည်းချဲ့တယ်..။
အဲဒီ တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ ကလည်း သူ့ကို လက်ခံလိုက်ရင်
ဘယ် သူ့ကို မှ မရှောင်ဘူး ဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲ..။
သံသရာ ဝဋ်က ကျွတ်လွတ်တဲ့ တရားထူးတရားမြတ်တွေ အရနှေးလိမ့်မယ်..။
တရားရချင်ရင် အဲဒါတွေကို စွန့်ရမယ်..။
ဒါမှ - အနေလည်းကောင်းမယ်..အသေလည်းကောင်းမယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:39 AM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:58 PM3မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 1:24 AM 8 မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဝိပဿနာပညာ(တဏှာ အစပ်ပြတ်ပုံ)တရားတော် ကို ဟောတရားမှ နာ ယူပြီး စာသား များအဖြစ်ပြောင်းလဲတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
သည်တရားကို ဆရာတော်ဘုရား သြစတေလျနိုင်ငံ ၊ဆစ်ဒနီ မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ၅ ရက်တရားစခန်းပွဲ အတွင်း (၆.၂.၂၀၀၈) နေ့တွင်ဟောကြားတော် မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
သေချာ အချိန်ပေး၍ စူးစူးစိုက်စိုက် နာယူမှသာ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက် လေ့ ရှိသည် မှာ ကျွန်မ တို့ ယောဂီများ ကိုယ် တွေ့ ပင် ဖြစ်ပါသည်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကျွန်မတို့အားဆုံးမပါသည်..။တရားနာယူဘို့ အချိန်ပေးရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမည်ဟုမိန့်ကြားဘူးပါသည်..။အဝတ်လျှော်ရင်း၊ မီးပူတိုက်ရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း တရားမနာဘို့ ကိုအထူးသတိပေးလေ့ရှိပါတယ်..။
ဤတရားတော် သည် ၂နာရီကြာဟောတရားဖြစ်ပါသည်..။ကျွန်မ မှာ စာရိုက် သိပ်မမြန်သဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နာယူခဲ့ပါသည်..။ရိုက်ခဲ့ပါသည်..။နာယူခွင့် လုပ်ဆောင်ခွင့်ကို ထိုက်တန် သည် ဟုကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
ကျွန်မ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက် ခိုက်ပြီးကာစကာလ မှာမြန်မာ သို့ ပြန်ခဲ့ပါသည်..။ဆရာတော်ဘုရား ၏ကျောင်း တည်ရှိရာ တိုးကြောင်လေး မှ ဒုက္ခသည် များကို ဆရာတော် ဘုရား ကူညီစောင့်ရှောက် နေစဉ်ကာလ ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်မ၏ ကျောင်း(University Of Camerino)နှင့်ရောမ မြို့ရှိ Ajhan Chah ဘုန်းကြီးကျောင်း(သန္တစိတ္တရာမ) မှ အလှူ ငွေများကောက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်..။ Euro ငွေများအပြင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကန်းများ လည်း ပေး လှူ လိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်မလည်း လှူဖွယ် များကို သယ်ဆောင်လျက် ဆရာတော်ဘုရား၏ကျောင်းသိုချီတက်ခဲ့ပါတယ်..။ငွေများ ၊သင်္ကန်းများလှူပြီးချိန်တွင်..ဆရာတော်ဘုရားကို ကျွန်မလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်..။
(အရှင်ဘုရား တပည့်တော် အချိန်တစ်လ လှူဒါန်းပါတယ်ဘုရား ၊ဤဒုက္ခသည် များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ဝေယျာဝစ္စ အလုပ်ရှိလျင် တပည့်တော် လုပ်ဆောင်ပါရစေဘုရား) ဟု လျှောက် ထားခဲ့ပါသည်..။ဆရာတော် ကျောင်းတွင် ထမင်းထုပ်ဝေခြင်း၊ အိမ်ဆောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးနေ ပါသဖြင့် ထမင်းဝင်ချက်ရန်ရည် ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။
တစ်လ ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လား ပြန်မေးပါသည်..။ဟုတ်မှန်ကြောင်းလျှောက်ထားသည့်အခါ..ကျွန်မ အားဤ Assignment ကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်..။ တာဝန်ကတော့ (ဝိပဿနာပညာ ၊တဏှာအစပ် ပြတ်ပုံ ) ကို နာယူပြီး မြန်မာလို စာရိုက်ရန် နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရန် တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မသည် တစ်လအတွင်း မပြီးပြတ်ခဲ့သည့် အပြင်..ကျွန်မ၏ ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးနှင့် အတူမန္တလေး မြို့ တွင် နေခဲ့ရခြင်း၊ ပြုစုခြင်း၊သေဆုံးခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် ဆရာတော်ဘုရား အမေရိကန်သို့မကြွရောက်ခင် ပေးအပ် နိုင်ခြင်းမရိ်ှခဲ့ပါ..။ ရန်ကုန်သို့ ပင် သွားရောက် မကန်တော့နိုင်ခဲ့ပါ..။ဆရာတော်ဘုရားခွင့်လွှတ်ပါရန်လည်း သည် နေရာ၊သည် စာမျက်နှာမှ ရိုသေစွာ တောင်းပန်ပါတယ် ဘုရား။
ဆရာတော်ဘုရားက ကမ္ဘာ ကို ပြရမဲ့တရား ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားတော် မူပါတယ်..။ဓမ္မမိတ် ဆွေများ တန်ဘိုး ထား ဖတ်ရှုလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့် ယုံကြည် မိပါတယ်..။
ရှိပြီး ထုတ်ဝေပြီးစာအုပ် တစ်အုပ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လည်းပြောပြချင်လို့ပါ..။တစ်ချို့ ပုံ များကို VideoDVDမှ Print Screen လုပ် ပြီး တင်ထားတာ ကိုလည်း အဆင်မပြေလျင် ကျွန်မ အားပြော ကြားစေလိုပါတယ်ရှင့်။
ဤ DVD မှတ်တမ်း နှင့်အသံဖမ်းစနစ်ကောင်းမွန်လှကြောင်းကို ဆရာတော်ဘုရား၏ အတွင်းနေ တပည့်ရင်း ဦးနေရီမှ ပြောပြပါသည်။
သည် အတွက် Austrailia, Sydneyမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ ကောင်းမှုကုသိုလ် နှင့် စေတနာတရားများ ၊ဤစာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသည် ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြ အပ် ပါတယ်။
တစ်ခြားသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကြွားဝါလိုတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုလည်းကျွန်မအားနားလည်လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ပြန်ဆိုထားတာ ကို လည်းဆက်လက် တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
လေးစားအပ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ တဏှာ အစပ် ပြတ်နိုင် ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သ အပ်ပါ တယ်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:10 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Publish at Scribd or explore others: Books pilot sayadaw
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:29 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ သြဝါဒ များ (၄)
ရွှေကျင်နိကာယ၊ရတ္တညူ မဟာနာယက ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ မဟာထေရ်မြတ်၏သြဝါဒ
မိဒွေးတော် ဂေါတမီက မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်..။
(မြတ်စွာဘုရား သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ။ မအို မနာ မသေ အမြဲနေပြီး လောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက် နိုင်ပါစေ၊ ဝေနေယျများကို ကျွတ်တမ်းဝင်အောင် ဟောပြနိုင်ပါစေ။)
ဆို ပြီးတပည့်တော်မ အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါတယ် ဘုရား။
မြတ်စွာ ဘုရားက မိဒွေးတော် ဂေါတမီ ရဲ့ ကန်တော့ခြင်းဟာ
သင့်မြတ်သလို ရှိသော်လည်း နှစ်သက်တော် မမူဘူး။
(မိဒွေးတော် ၊ ဟောဟိုက ပြင်းထန်တဲ့ လုံ့လ ဝီရိယ နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို အာ ရုံညွှတ် ပြီး၊
သတိ မပြတ် ရှုမှတ် ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ သာဝက ရဟန်းအပေါင်း ကိုကြည့်လိုက် စမ်းပါ။
သူတို့ ကမှ ဘုရား ကိုအစစ်တကယ် ပူဇော်နေကြခြင်း ဖြစ်တယ်..။)
လို့ မိန့်တော် မူလိုက်ပါတယ်..။
ယောဂီတိုင်း ယောဂီတိုင်းမှာ စွမ်းအားတွေရှိကြပါတယ်..။
ယုံကြည် ချက် သဒ္ဓါစွမ်းအားလည်းရှိတယ်..။
အားထုတ်မှု ဝီရိယ စွမ်းအားလည်းရှိတယ်..။
စူးစူးစိုက် စိုက် သမာဓိ စွမ်းအားလည်းရှိနေကြပြီ…။
မမေ့မလျော့တဲ့ သတိ စွမ်းအားတွေလည်း ရှိနေကြပြီ..။
အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသိစွမ်းအားတွေလည်း တိုးတက်နေမှာပဲ..။
စွမ်းအားတွေရှိရက် သားနဲ့ စွမ်းအားတွေ မတိုးတက်ရင်…။
စွမ်းအားလျော့နည်း နေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်လေးကို နှိုးဆော်ပေးပေါ့.။
အဲဒီလို အခွင့်ကောင်းတွေ မဆုံးရှုံးရအောင် ကြိုးစားမှတော် မယ်..။
အချိန်တွေ အလကားဖြုန်းပစ်ရင်..နောင်အခါ သေရာညောင်စောင်း လှဲလှောင်းတဲ့ အခါကျမှ..
အားထုတ်ခွင့်ရရဲ့သားနဲ့ ပြည့်စုံ လုံလောက်အောင်..အားမထုတ်ခဲ့ မိတာ ..။
အမှားကြီး မှားလေခြင်း ..လို့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ နောင်တ ရတတ်တယ်..။
အဲဒီလို နောင်တ မရအောင်ခုထဲက ကြိုကြိုတင်တင်…ထိုက်တန်သလောက်..
သာသနာတော် နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်အောင်…ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင် ခဲ ဆိုတဲ့ အတိုင်း…
ကိုယ့်ကိုကို ဆုံးမပြီးတော့ အားထုတ်သွားကြနော်..။
မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေ အဖို့တော့ ကိုယ့်ကိုဟာ ကိုယ့်ရန်သူပဲ..။
မိတ်ဆွေမဟုတ်ပဲရန်သူ ဖြစ်နေရင် ဘယ်ကောင်းတော့ မလဲနော်..။
သင်မကောင်းလျင် ကျွန်ပ်ဆိုးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်..။
ဒါဆို အတော့်ကို ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:34 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်